Ukuthengisa nge-imeyile: Uluhlu oluLula lokuBhaliswa koVavanyo | Martech Zone
Umbhalisi ukugcinwa ineengcambu zayo kwishishini lamaphephandaba. Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, ndasebenza kwinkampani yeNtengiso yeDatabase egxile kwi-Newspaper Subscription Analytics. Enye yeendlela eziphambili zesahlulo kunye nentengiso kwithemba lokurhuma yayikukukwazi kwabo 'ukugcina'. Khange (sihlale) sifuna ukuthengisa kumathemba angenakuhlala kakuhle, xa sifuna ukufumana ubulindelo obulungileyo, siya kuthengisa kubamelwane nakwimizi esaziyo ukuba igcinwe kakuhle. Ngamanye amagama, khange babambe i-13 yeeveki ezizodwa emva koko babheyile, bayakuhlaziya kwaye banamathele.
Ukuhlalutya indlela eyayiqhuba ngayo imveliso kunye nendlela intengiso yethu eyayiqhuba ngayo, sasiza kuqhubeka ngokuhlalutya ukugcinwa kwabathengi bethu. Oku kungasinceda sihlale kwinjongo. Kananjalo, kuya kusinceda ukuba siqikelele ukuba bangaphi abathengi abaya kushiya ngokuchaseneyo nokuhlala ukuze sikwazi ukucwangcisa amaphulo ethu okufumana ngokufanelekileyo. Kwiinyanga zasehlotyeni apho abantu beza kuya eholideyini, sinokuthi sithengise kugcino-mali oluncinci lokugcina nje ukubala kubhalisile (ukubhalisela ukubhalisa = ukubhengeza iidola kwishishini lephephandaba).
Kutheni le nto kufuneka uhlalutye ukugcinwa koluhlu?
Ndiyamangaliswa ngokunyanisekileyo ukuba, ngenxa yexabiso ledilesi ye-imeyile, abathengisi be-imeyile abalwamkelanga uhlalutyo lokugcina. Uhlalutyo lokugcina kubabhalisi be-imeyile kubalulekile kwizizathu ezininzi:
Ngokugcinwa okuphantsi kuza neengxelo eziphezulu ze-junk / spam. Ukubeka iliso kugcino lwakho kuluhlu kuya kukunceda ekwakheni igama lakho kunye nokuthintela imiba yokuhanjiswa kunye nabanikezeli beenkonzo ze-Intanethi.
Ukusetha iinjongo zokugcina yindlela efanelekileyo yokuqinisekisa ukuba umxholo wakho uphezulu. Iya kukuxelela ukuba mangaphi amaxesha onokubeka emngciphekweni umxholo ongalunganga ngaphambi kokuba umrhumi athathe isigqibo sebheyile.
Uhlalutyo lokugcina luya kukuxelela ukuba luluhlu olubi kangakanani uluhlu lwakho kwaye bangaphi ababhalisile ekufuneka uqhubeke ukongeza ukugcina uluhlu lwakho kwaye; ngenxa yoko, iinjongo zakho zengeniso.
Ukulinganisa njani ukuGcina kunye nokuTsala kuLuhlu lwabaThumeli be-imeyile
Umzekelo endiwunike apha wenziwe ngokupheleleyo, kodwa uyabona ukuba unokunceda njani. Kule meko, (jonga itshathi) kukho ukwehla kwiiveki ezi-4 kunye nezinye kwiiveki ezili-10. Ukuba lo ibingumzekelo wokwenyani, ndingafuna ukubeka umxholo onamandla ajikeleze uphawu lweveki ezi-4 olongezela i-zip kweli phulo! Kuyafana ngeveki ye-10!
Ukuqala, ispredishithi endisisebenzisayo ngokusisiseko sithatha wonke umntu obhalisileyo kwaye sibala umhla abaqale ngawo kunye nomhla wokungabhalisi (ukuba bazikhuphile. Qiniseka ukuba ujonge ukubala- benza umsebenzi olungileyo wokufihla ulwazi apho kufanele ukuba kungabinanto nokubala kuphela kwiimeko.
Uya kubona igridi enesiphumo sokubamba iintsuku ezipheleleyo ababebhalisile ukuba bazikhuphile. Olu lulwazi endiza kulusebenzisa kwicandelo lesibini lohlalutyo ukubala izinga lokugcina veki nganye.
Umjikelo wokugcina usemgangathweni kulo naliphi na ishishini elilinganisela ukubhaliswa, kodwa linokusetyenziselwa ukuhlalutya ukugcinwa kwamanye amashishini - ukuhanjiswa kokutya (zingaphi izinto ezithunyelwayo kwaye kangaphi ngaphambi kokuba umntu ahambe ngokulungileyo… mhlawumbi 'enkosi' ekhethekileyo phambi koko (i-point is in order), iinwele, iinwele, irente… uyiqamba igama kwaye ungabala umtsalane kunye nokugcinwa kwabathengi bakho.
Ukugcina abathengi kuhlala kubiza kakhulu kunokufumana ezintsha. Ungasebenzisa uHlahlelo lokuGcina ukubala kunye nokubeka iliso kugcino lwakho.
Ngomzekelo wam wobuxoki, uya kubona ukuba ukugcina uluhlu lwam lubalulekile, kuya kufuneka ndongeze enye i-30 +% yababhalisi kwiinyanga nje ezimbalwa. Okwangoku akukho migangatho yeNtengiso ye-imeyile yoHlalutyo lokuGcina- ke ngokuxhomekeke kumzi mveliso wakho kunye namaphulo akho, ukugcinwa kwoluhlu lwakho kunye nokutsala kunokuhluka kakhulu.
Khuphela i-Excel Ukugcinwa kwespredishithi
Khuphela iSampula ye-Excel Spreadsheet
Esi sisampulu nje esisiseko endisibeke ndawonye esi sithuba. Nangona kunjalo, igcina lonke ulwazi oludingayo ukuze ukwazi ukuhlalutya ukugcinwa kwakho. Cofa nje kwitshathi engezantsi kwaye wenze 'Gcina njenge' ukukhuphela ispredishithi endisakheleyo kwalapha.
Ukuba ufuna uncedo lokwenza olu hlobo lohlalutyo kuluhlu lwakho ndazise! Ingena ngokwenene xa unekhaya, inani labantu, indlela yokuziphatha, umxholo, kunye nedatha yeendleko ngokunjalo. Oko kukuvumela ukuba wenze isahluko esimangalisayo sokujolisa ngcono kwintengiso yakho kunye nomxholo kubaphulaphuli bakho.
tags: ifomula ye-imeyileuluhlu lwe-imeyile olwenziweyoI-imeyile metricUkugcinwa kwe-imeyilephambiliuluhlu lokugcinaUluhlu lwengenisoukugcinwaukugcinwa komrhumi